Ny fanadihadihana nangatahana na karamaina dia famerenana mampidi-doza | Martech Zone
Nanana adihevitra mafonja izahay tamin'ny hetsika fitarihana isam-paritra momba ny fanangonana fanamarihana avy amin'ny orinasa sy ny mpanjifa amin'ny Internet. Ny ankamaroan'ny fifanakalozan-kevitra dia manodidina ny hevitra nandoavam-bola na valisoa ho an'ny mpanjifa. Tsy mpisolovava aho, koa atoro anao hiresaka amin'ny anao alohan'ny fihainoana ahy. Tsotra ny fijoroako amin'ity… Aza mandoa na manome valiny. Mety tsy hitovy hevitra amiko ianao, fa tahaka ny nahitana ny indostrian'ny fikarohana voajanahary noho ny laharam-pisondrotana diso, dia manana olana mitovy amin'izany ihany koa ny hevitra. Ary ireo orinasa nandray anjara dia very zavatra betsaka noho ny azony.
Ny loza ateraky ny hevitra voaloa sy valisoa
Izaho manokana dia mino fa hanana olana 4 ianao rehefa mandoa na manome valin-kafatra:
olana ara-pitsarana - Mety tapaka ianao Torolàlana FTC. Tsy izany ihany, ny mpiasa, orinasa, na olona aloanao dia mety hanimba ny torolàlana FTC ihany koa. Androany, tsy mahita hetsika maro isika amin'izany. Na izany aza, amin'ny ho avy dia mino aho fa hisy ny rafitra havaozina hamantatra ny fifandraisana izay hanakorontana ny ankolafy rehetra amin'ny farany. Ankoatra ny governemanta, aza gaga raha manenjika ny iray amin'ireo sehatra ihany koa ianao.
fanitsakitsahana - Mety hampiasa vola kely amin'ny famerenana androany ianao, fa rehefa tratra ianao manitsakitsaka ny fepetran'ny serivisy an'ity tranonkala ity dia ho very mandrakizay izany atiny izany ary mety ho simba ny lazanao mihoatra noho izay fampiasam-bola nataonao rehetra. Ny tratra mandoa ny famerenana ary manao izany ampahibemaso dia tsy mendrika atahorana. Vola vitsivitsy laniana anio dia mety handany ny zava-drehetra amin'ny orinasa any aoriana.
Tsy Nivadika - Tena matotra, aiza ny fahamendrehanao amin'ny maha-orinasa anao? Izany tokoa ve no irinao hanaovana raharaham-barotra? Raha tsy azonao atokisana hitantana laza madio an-tserasera ianao, dia mino tokoa ve fa te hivarotra aminao ny mpanjifa sy ny orinasa?
Quality - Manomeza tombontsoa ho anao ary mandehana mamaky hevitra sasany momba izany Lisitr'i Angie. Tsy fehezan-teny iray ireo, tsikera momba ny kalitao izay mamaritra ny dingana rehetra nandalovan'ny mpividy niaraka tamin'ny mpanome tolotra. Ny List an'ny Angie dia nampidina ny tamban-karaman'izy ireo ary tsapan'ny mpanjifa izao ny antony mahatonga ny mpamandrika Angie's List ho tia ny serivisy. Sarotra ny sandoka ny famerenana tsara.
Ka Ahoana no fomba ahazoanao hevitra bebe kokoa?
Misy mahasamihafa azy fangatahana ho an'ny hevitra sy ny fangatahana ho azy ireo. Nizara tantara aho taona vitsivitsy lasa izay tamin'ny Fangatahana fanadihadiana amin'ny GM nahatsiravina tanteraka izany. Amin'ny ankapobeny, raha mamaly zavatra tsy lavorary aho, dia hokapaina ny lohan'olona. Fangatahana izany. Ary ny filazanao amin'ny mpanjifanao fa misy valiny ny fanamarihany dia tsy misy hafa amin'ny fangatahana ny famerenana! Aza atao izany.
Rehefa manoratra anay amin'ny fisaorana ny iray amin'ireo mpanjifanay, mibitsika ny ankihiben-tànana an-tserasera, na milaza aminay manokana ny fankafizany anay, misaotra azy ireo izahay ary manontany raha azon'izy ireo atao ny manoratra izany… na amin'ny fijoroana vavolombelona nataon'ny mpanjifa na famerenana amin'ny Internet. Jereo ny baiko? Nolazain'izy ireo taminay aloha, ary avy eo izahay dia nangataka izany. Tsy nangataka izany izahay raha tsy nisy ny hevitr'izy ireo. Tsy nampanantena na inona na inona ho setrin'izany koa izahay. Afaka manara-maso fanomezana iray ho fisaorana ve izahay? Mazava ho azy, saingy tsy nampoizina na nampanantenaina izany.
Manoro hevitra ny hamoaka ny pejinao ihany koa aho isaky ny tranokala fanamarinana ao amin'ny tranonkalanao. Io dia tsy fangatahana mba hampahafantarana ny prospect sy ny mpanjifa ny toerana hahitana anao… ary ny mpanjifa faly dia hihazakazaka mankany amin'ny pejy Facebook anao ary hanome anao hevitra. Ataovy mora ho an'ny mpanjifanao ny mahita, mampiditra azy amin'ny fifandraisana anatiny amin'ireo mpanjifanao, ary zarao ireo hevitra tsara nataonao rehefa natolotra izy ireo.
Ny kalitaon'ny sehatra famerenana tsirairay dia miankina amin'ny kalitaon'ny fanamarihana ananany any. Ankoatry ny politika henjana, maro amin'ireo serivisy ireo koa no mampiditra algorithman mba hialana amin'ny tsikera sandoka. Amazon dia tena matotra amin'ny politikan'izy ireo ary mavitrika izao manenjika olona an'arivony mivarotra hevitra. Ireto misy tranokala fanamarihana iraisana sy ny politikany:
Politika famerenana Amazon
Amazon dia tsy mitetika ny teny ary tsy mila namana, fianakaviana na mpikambana ao amin'ny orinasa hanao hevitra. Tsy tian'izy ireo koa ny fandoavanao vola ho azy ireo, mazava ho azy.
Hevitra fampiroboroboana - Mba hitazomana ny fahamendrehan'ny Heverin'ny mpanjifa, tsy avelanay ny artista, mpanoratra, mpamorona, mpamokatra, mpanonta, mpivarotra na mpivarotra hanoratra ny hevitry ny mpanjifa ho an'ny vokatra na serivisin'izy ireo manokana, handefa tsikera ratsy momba ny vokatra na serivisy mifaninana. , na mifidy ny amin'ny maha-ilaina ny hevitra. Noho io antony io ihany, ny olona ao amin'ny fianakaviana na ny namana akaiky an'ilay olona, ​​vondrona na orinasa mivarotra amin'ny Amazon dia mety tsy manoratra Customer Review momba ireo entana manokana ireo.
Fanamarihana karama - Tsy avelantsika hisy ny hevitra na ny vato mahasoa momba ny fanampiana azo tsapain-tanana izay napetraka ho takalon'ny fanonerana na inona na inona karazana, ao anatin'izany ny fandoavam-bola (na amin'ny endrika vola na fanamarihana fanomezana), atiny bonus, fidirana amin'ny fifaninanana na famafana, fihenam-bidy amin'ny fividianana amin'ny ho avy, vokatra fanampiny, na fanomezana hafa.
Politikan'ny famerenana an'i Google
Politikan'ny Review Google milaza mazava fa hanala ny atiny izay manitsakitsaka ny politikan'izy ireo:
Fifandirana mahaliana: Sarobidy indrindra ny hevitra rehefa manao ny marina sy tsy miangatra izy ireo. Raha manana na miasa amin'ny toerana iray ianao, azafady aza avereno jerena ny orinasanao na mpampiasa anao. Aza manolotra na manaiky vola, vokatra na serivisy hanoratanao hevitra ho an'ny orinasa iray na hanoratanao hevitra ratsy momba ny mpifaninana iray. Raha tompona orinasa ianao dia aza manangana gara na kioska ao amin'ny toeram-piasanao raha te hangataka famerenana voasoratra ao amin'ny toeram-piasanao.
Politika famerenana ny Yelp
Yelp fisaka dia miteny amin'ny orinasa Aza mangataka hevitra:
Ny fanamarihana nangatahina dia tsy dia atolotry ny rindrambaiko mandeha ho azy, ary hahatonga anao hadalana. Fa maninona no tsy atolotra ireo hevitra ireo? Izahay dia manana ny anjara asa mampalahelo amin'ny fanandramana manampy ny mpampiasa anay hanavaka ny famerenana ny tena izy sy ny sandoka, ary na dia mieritreritra aza izahay fa manao asa tsara dia tsara amin'ny alàlan'ny algorithma momba ny solosaina mahafinaritra, ny zava-misy henjana dia matetika ny fanamarihana nangatahina dia latsaka anelanelany . Alao an-tsaina, ohatra, ilay tompona orinasa izay "mangataka" famerenana amin'ny alàlan'ny fametahana solosaina finday eo imason'ny mpanjifa ary manasa azy tamim-pitsikiana izy hanoratra famerenana raha mijery eo an-tsorony izy. Tsy mila an'ireny karazana hevitra ireny izahay, koa tsy tokony hahagaga raha tsy tolo-kevitra izy ireo.
Politika famerenana ny lisitr'i Angie
Ny lisitr'i Angie dia manana mazava mazava tsara amin'ny politikam-pandinihan'izy ireo:
Ny famerenanao sy ny naotinao rehetra dia hiankina amin'ny: (i) Ny zavatra niainanao voalohany niaraka tamin'ny Mpanome Serivisy izay dinihinao; na (ii) araka ny voalaza ao amin'ny Fizarana 14 (Mpanome Tolotra) etsy ambany, ny zavatra niainan'ny olona iray sy ny tena olona niaraka tamin'ny mpitsabo na mpitsabo izay ahazoanao milaza ara-pahasalamana sy traikefa an'io olona io;
Ny hevitrao rehetra sy ny naoty nomen'ireo Mpanome Tolotra izay isainao dia ho marina, marina ary feno amin'ny lafiny rehetra;
Tsy miasa ianao, tsy misy mahaliana, na manompo amin'ny filankevi-pitantanan'ny, na iza na iza amin'ny mpanome tolotra izay anaovanao fanamarihana sy naoty;
Tsy miasa ianao, manana fahalianana na manompo amin'ny filankevi-pitantanan'ny mpifaninana amin'ny mpamatsy tolotra izay andefasanao hevitra sy naoty;
Tsy misy ifandraisany amin'ny lafiny iray (amin'ny alàlan'ny ra, fananganana, fanambadiana, na fiaraha-miasa ao an-tokantrano, raha toa ka olon-tokana ny Mpanome Serivisy) amin'ireo Mpanome Tolotra izay andefasanao hevitra na naoty;
Ny anaranao sy ny fampahalalana momba ny famerenana dia ho azonao omena an'ireo Mpanome Tolotra izay dinihinao; ary
Ny Lisitr'i Angie dia mety manova, mampifanaraka, na manilika ny hevitrao raha tsy mifanaraka amin'ny mason-tsoratry ny famoahana Angie's List, izay mety hiova tsindraindray noho ny fahalalàn'ny Angie's List.
Politika famerenana Facebook
Manondro ny azy ireo ny Facebook Fitsipiky ny fiarahamonina saingy tsy dia voafaritra tsara momba ny fangatahana na fandinihana voaloa na dia manasongadina ny hevitra tena izy aza.
Tags: politika famerenana amazonafamerenana amazonaamazona nitory ireo mpandinikapolitika famerenana ny lisitr'i angiefanamarihana ny lisitr'i angiepolitika famerenana facebookhevitra amin'ny facebookgoogle politika famerenanapolitika famerenana googlegoogle hevitrahevitra nandoavaliny valisoapolitika famerenana yelphevitra yelp
Google Analytics: Ireo mari-pamantarana ilaina amin'ny marketing amin'ny atiny
LookBookHQ: Sehatra fampiroboroboana atiny sy automatique